Kali Linux 2020.4 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Kali Linux 2020.4 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
vao haingana Navoaka ny fanambarana famoahana Kali Linux 2020.4, izay fanovana lehibe maromaro no natao, hatramin'ny niovan'ny ZSH ho Bash amin'ny sary birao, ary koa ny kinova Win-Kex vaovao, fitaovana vaovao nampiana ary maro hafa.
Ho an'ireo tsy zatra ny Kali Linux, Tokony ho fantatr'izy ireo fa natao hizaha toetra ireo rafitra marefo, fanaraha-maso, famakafakana angon-drakitra sisa tavela ary fantaro ny vokatr'ireo fanafihana mahatsiravina.
Kali ahitana ny iray amin'ireo fanangonana fitaovana feno indrindra ho an'ireo matihanina ny fiarovana ny solosaina, manomboka amin'ny fitaovana hanandramana ny rindranasa amin'ny Internet ary ny fidirana amin'ireo tambajotra tsy misy tariby ka hatramin'ny fandaharana hamakiana angona avy amin'ny puce RFID Ny kit dia misy fanangonana fitrandrahana sy fitaovana mihoatra ny 300.
1 Kali Linux 2020.4 Endri-javatra vaovao lehibe
2 Sintomy ary mahazoa Kali Linux 2020.4
Kali Linux 2020.4 Endri-javatra vaovao lehibe
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny Kali Linux 2020.4 ity dia lazain'ireo mpandrindra fa de akorany ZSH default no ampiasaina fa tsy Bash.
Ny antony hivadihana amin'ny ZSH dia voatonona ho manana fahaiza-manao mandroso ary ny fahaizana mampiasa Bash dia avela ho safidy (chsh -s / bin / bash), ary ny tsipika fibaikoana dia ZSH.
Rehefa miditra ao amin'ny console ianao dia misy hafatra aseho miaraka amin'ny rohy mankany amin'ilay rakitra, sary sy torolàlana fametrahana manokana manova / usr / bin / python manomboka amin'ny Python 2 mankany Python 3.
Nasongadina ihany koa ireo fanamboarana nohavaozina ho an'ny AWS EC2 ary nanampy fanampiana ho an'ny GovCloud.
Ary koa, ao amin'ity kinova vaovao an'ny Kali Linux 2020.4 ity Ny kinova fonosana nohavaozina amin'ny ankamaroan'ny singa ao amin'ny rafitra dia tafiditra ao, izay efa nifanaraka tamin'ireo Debian, toy ny kernel Linux izay nohavaozina tamin'ny kinova 5.9, GNOME ka 3.38 ary KDE ka hatramin'ny 5.19.
Amin'ny alàlan'ny default, fonosana proxychains4 no ampiasaina (ProxyChains-NG), izay ampiasaina handefasana fifandraisana amin'ny alàlan'ny proxy SOCKS4a / 5 na HTTP-based.
Ary ireo fitaovana vaovao nanampy:
Rafitra Metasploit v6
Amin'ny lafiny Win-Kex (Windows + Kali Desktop EXperience) natao hihazakazaka amin'ny Windows ao amin'ny tontolo WSL2 (Windows Subsystem for Linux), ity nohavaozina ary ao amin'ny kinova vaovao "Modus session namboarina" nampiana (–Esm), izay mampiasa RDP hidirana.
Mandritra izany fotoana izany dia nomanina ny fanombohana ny NetHunter 2020.4., tontolo iainana ho an'ny fitaovana finday miorina amin'ny sehatra Android miaraka amin'ny fisafidianana fitaovana hanandramana rafitra ho an'ny marefo.
Amin'ny fampiasana NetHunter, azo atao ny manamarina ny fampiharana ny fanafihana manokana amin'ny fitaovana finday, ohatra, amin'ny alàlan'ny fakana tahaka ny fitaovana USB (BadUSB sy HID Keyboard - fakana tahaka ny adaptatera tambajotra USB izay azo ampiasaina amin'ny fanafihana MITM, na fitendry. USB izay manolo ny toeran'ny olona) ary mamorona teboka fidirana sandoka (MANA Evil Access Point).
Ny NetHunter dia napetraka ao amin'ny tontolo iainana mahazatra an'ny sehatra Android amin'ny endrika sary chroot, izay manana kinova manokana namboarina amin'ny Kali Linux.
Amin'ireo fanovana ao NetHunter 2020.4, menio vaovao no misongadina amin'ny famerenana sy famerenana amin'ny laoniny ireo rakitra fanahafana, ary hanova sary mihetsika boot.
Ny modely "Magisk Persistence" dia tafiditra ao, izay ahafahanao mandingana ny enta-mavesatra Magisk (mamela anao hanova ny singa ao amin'ny rafitra sy hampiasa ny fidirana amin'ny faka) aorian'ny fametrahana NetHunter.
Sintomy ary mahazoa Kali Linux 2020.4
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Kali Linux 2020.4 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Xfce 4.16 dikan-pitsarana faharoa ankehitriny